आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र ३१ गते बिहीबारGandaki Press
वि.सं. २०७८ साल भाद्र ३१ गते बिहीबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ सेप्टेम्बर १६ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्रशुक्लपक्षको दशमी तिथि पूर्वान्ह १०:२१ बजेसम्म, त्यसपछि एकादशी रहनेछ ।
मेष : धार्मिक कृत्यमा मन जागृत हुनेछ । काम कर्तव्यप्रति जिम्मेवारी बढ्नेछ । सत् कार्यको आरम्भले गर्दा धेरै व्यक्तिको साथ तथा समर्थन पाइनेछ । प्रतिष्पर्धात्मक कार्यमा विजयी भइनेछ । बोलिको कदर हुनेछ ।
वृष : पूर्वान्हको समयमा समस्याले छाड्ने छैन । चिन्ताप्रद खबरले सताउनेछ । तर मध्यान्ह पछिको समय सुधारिएको छ । सकारात्मक सोचाइ रहनेछ । काम गर्ने जोश जाँगर बढेर जानेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।
मिथुन : मध्यान्ह अघि विशेष अवसर मिल्नेछ भने मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो भेटघाटको योग समेत देखिन्छ । उत्तराद्र्धको समयमा स्वास्थ्य कमजोर तथा आर्थिक पक्षमा मन्दिपन रहनेछ । समस्या सृजना हुनेछ ।
कर्कट : अधिक परिश्रम गर्नु परेता पनि उचित रुपमा प्रतिफल मिल्दा खुसी लाग्नेछ । मिहिनेती प्रवृत्तिको विकास हुनेछ । प्रेमीप्रमीका विचको सम्बन्ध प्रगाढ रहनेछ । नयाँ लगानिको अवसर जुट्ने देखिन्छ ।
सिंह : बौद्धिक क्षमताको कदर हुनेछ । पारिवारिक सहयोगले कार्य बन्नेछ । व्यवसायबाट सोचे भन्दा बढि लाभ मिल्दा खुसी लाग्नेछ । वेलुकीपख सामान्य स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ, खानपान एवं व्यायाममा ध्यान दिनुहोला ।
कन्या : पूर्वान्हमा आफन्तजनसँग विवाद एवं आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेता पनि मध्यान्ह पछि समय अनुकूलको बन्नेछ । पढाइलेखाइमा मन जानेछ । सत् विचारको उदय हुनेछ । टाढिएका आफन्तसँग मिलन हुनेछ ।
तुला : सहमतिबाट समस्याको निराकरण हुनेछ । साझेदारी कार्यबाट लाभ मिल्नेछ । मध्यान्ह पछि एक्कासी स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ । दैनिक काम कार्यमा समेत अवरोधको स्थिति सृजना हुनेछ, सजक रहनु होला ।
बृश्चिक : उत्साह उमंग छाउनेछ । समाजमा बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिनेछ । साथीभाईसँगको रमाइलो जमघटको योग बनेको छ । काम गरेर आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ । कृषि एवं बन्दव्यापारबाट लाभ मिल्नेछ ।
धनु : धेरै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ । विद्यार्थी वर्गका लागि विशेष अवसर मिल्नेछ । प्रीयजनसँगको रमाइलो पल वित्नेछ । वेलुकीपख अल्छि गर्नाले मौका फुत्कन सक्छ, जागरुक भएर कार्य गर्नुहोला ।
मकर : विहानीको समय अन्योलमा नै वित्नेछ । काम गरेर जस भन्दा अपजस व्यहोर्नु पर्नेछ । मध्यान्ह पछि काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । अध्ययनमा मन जानेछ । आर्थिक पक्षमा समेत सुधारको संकेत देखिन्छ ।
कुम्भ : सहोदरका व्यक्तिको साथ पाइनेछ । सानो लगानिबाट नै धेरै लाभ उठाउन सकिनेछ । तर मध्यान्ह पछि खर्चभार बढेर जानेछ । झन्झटिला कार्यको नेतृत्व गर्नु पर्नेछ । मेहिनेत अनुरुप लाभ मिल्ने छ्रैन ।
मीन : काम गर्ने जोश जाँगर बढेर जानेछ । प्रतिष्ठित कार्यको आरम्भ गरिनेछ । भौतिक सुखसुविस्ता उपभोग गर्न पाइनेछ । मान्यजनको साथ समर्थन मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । आर्थिक अवस्था बलियो नै रहने देखिन्छ ।
आजको राशिफल २०७८ साल असोज ३ गते आइतबार
अशोज ३, २०७८ ०७:३१ मा प्रकाशित